Tools – Myanmar Leaders
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် New Year Resolution များနဲ့ Tool များ
December 22, 2015 November 28, 2018 denieldemon
၂၀၁၆ ခုနှစ်ကို ကြိုဆိုရင်း Professional များအတွက် ထားသင့်တဲ့ New Year Resolutions တွေနဲ့ အထောက်အကူပြု Tool တွေကို ရေးသားပေးထားပါတယ်.။ (7 Mins Read) အခုဆိုရင် 2015 ခုနှစ် ကို နှုတ်ဆက်လို့ 2016 ကို ကြိုဆိုရမယ့် အချိန် နီးကပ်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်.။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ထဲမှာ အောင်မြင်ခဲ့တာတွေကို ဒီနှစ်ထဲကို ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားပြီး ကျရှုံးခဲ့ရမှုတွေကိုလဲ သင်ခန်းစာယူပြီး ရှေ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဟာ လာမယ့်နှစ်မှာ ကိုယ်ဘာတွေ Accomplish ဖြစ်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားထားသင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီ Post မှာ MyanmarLeaders ရဲ့ ပရိသတ်များအတွက် နှစ်သစ်မှာ ပိုမိုအောင်မြင်ကြစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ Tools နဲ့ Apps များကို မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.။ (၁) အကျင့်ဆိုးတွေကို
ရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် Information များစုစည်းပေးမယ့် Website (2) ခု
August 4, 2015 denieldemon
ရေဘေးသင့်ဒေသများရဲ့ အချက်အလက်များကို သိလိုသူများနဲ့ လှုဒါန်းလိုသူများအတွက် website (၂) ခုကို ရွေးချယ်တင်ပြပေးထားပါတယ်.။ (3 Mins Read) ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း အဆိုးရွားဆုံးရေဘေးဒဏ်ကို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ.။ ဒီရေဘေးဒဏ်သင့်နေတဲ့ ဒေသတွေကို ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရော ကမ္ဘာကပါ ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ သတင်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သိရှိနိုင်ဖို့ နည်းပညာသမားတွေကြိုးပမ်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ website (2) ခုကို မိတ်ဆက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။ Myanmar Disaster ဒီ website မှာ ရေဘေးအတွက်ပါဝင်လှုဒါန်းလိုသူများအတွက် လှုဒါန်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီများ၊ သွားရောက်ကူညီကြမယ့်သူများအတွက် Information များနဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းနဲ့ ကြေညာချက်များကို တင်ပြပေးထားပါတယ်.။ Myanmar Flood Information ဒီ website မှာဆိုရင်လဲ ရေဘေးအတွက်ကူညီနေတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ information တွေ၊ သတင်းတွေ၊ ရေလွှမ်းမိုးခံနေရတဲ့ ဒေသတွေရဲ့ information တွေနဲ့ အွန်လိုင်းကတဆင့် ကူညီလှုဒါန်းလိုသူတွေအတွက် အချက်အလက်တွေကို
July 20, 2015 denieldemon
ရန်ကုန် အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးနှင့် ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးတို့ရှိ ကားဂိတ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်၏ လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ ပါရှိသည့် WayPyay (ဝေးပြေး) Application ကို Zwenexsys Int’l Ltd က စတင်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ အဝေးပြေးကားဂိတ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် Application အား လတ်တလောတွင် Android OS အတွက်သာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး လာမည့်နှစ်လအတွင်း iOS Platform အတွက် ဆက်လက် ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Zwenexsys Int’l Ltd ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုသာထက်က ပြောသည်။ “ခရီးသွားလာရင်း ကားဂိတ်ဖုန်းနံပါတ် သိချင်တဲ့အခါ ရှာမရတဲ့အခက်အခဲကို အဓိက ဖြေရှင်းပေးဖို့ပါ။ ကားလိုင်းပေါင်း နှစ်ရာကျော်ရဲ့ရန်ကုန်နဲ့ နယ်ဂိတ် လိပ်စာတွေ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ လိပ်စာကတ်တွေကို အင်တာနက်မလိုဘဲ
သင့် Startup အတွက် အသုံးဝင်မယ့် Tools (5) မျိုး
July 14, 2015 denieldemon
Startup တစ်ခုစတင်တည်ထောင်စဉ်မှာ သင့်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုလျှင်မြန်ပြီး Effective ဖြစ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့် Tools (5) ခုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။ (1) Trello Trello ဟာ Task assignment တွေ ချပေးရာမှာ၊ လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို Priority နဲ့ စီစဉ်ပေးရာမှာ၊ မလုပ်ရသေးသောအလုပ်၊ လုပ်ပြီးတဲ့အလုပ် အစရှိတဲ့ Task တွေကို Management လုပ်ရာမှာ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.။ သုံးရတာလဲ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး Google Account နဲ့ Login ဝင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.။ Trello ရဲ့ Card-based UI ဟာလဲ အမြင်ရှင်းသလို လွယ်ကူပါတယ်.။ Alternative: Asana (2) IFTTT Business တစ်ခုစတင်ပြီဆိုရင် နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာ တစ်ချို့အလုပ်တွေကို
Website တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အချက်များ
October 15, 2014 denieldemon
အသစ်တည်ဆောက်တဲ့ Website များအနေနဲ့ အောင်မြင်မှုရချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များကိုရှောင်သင့်ပါတယ်.။ 1. အသုံးပြုသူဘက်က မတွေးပေးခြင်း ကိုယ်တည်ဆောက်တဲ့ Website ကိုUser တွေဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကိုကြိုတွေးထားသင့်ပါတယ်.။ Computerနဲ့သုံးရင်ဘယ်လို Mobile နဲ့သုံးရင် ဘယ်လိုဆိုတာကအစ၊ မလိုအပ်ဘဲ အဆင့်တွေ ပိုနေသလား၊လေးနေလား၊ အရောင်သုံးတာတွေက မျက်စိစူးလွန်းနေလား အစရှိသဖြင့် တွေးပေးရပါမယ်.။ 2. Professional မဟုတ်သူတစ်ဦးကို ခန့်မိခြင်း Website တည်ဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်တဲ့အခါ Professional စစ်စစ်တွေကိုခန့်မိဖို့လိုပါတယ်.။ ဈေးသက်သာပြီးရော တော်ရိလျော်ရိတွေကို ခန့်မိရင်ပိုက်ဆံကုန်အချိန်ကုန်အကျိုးမရှိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်.။ 3. Goal တွေမသတ်မှတ်ထားခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားပြီးရောက်အောင် မသွားခြင်း သင့် Website ကို ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Goal တွေသတ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်.။သတ်မှတ်ပြီးရင်လဲရောက်အောင်သွားဖို့လိုပါတယ်.။ ဒါမှသာ အောင်မြင်တဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ.။